Namuhla, intuthuko kwezobuchwepheshe okhula ngokushesha kakhulu. Ngokwesibonelo, ngisho engu-20 edlule ezweni lethu, bambalwa kakhulu abantu bazi mayelana nokuba khona kwamakamu computer. Manje PC imele cishe kuzo zonke ekhaya. Nsuku zonke kukhona zobuchwepheshe ezikhiqizwa njalo, futhi elidala ubuchwepheshe yesimanje.
Ngakho, esanda kutholakala (ngoMashi 2013), ziye ngenkuthalo basakaza OLED-TV. Kuyini lokhu? Yilokhu sizoxoxa ngani kulesi sihloko. Sibheka ngokuningiliziwe izici zalesi zobuchwepheshe obuphambili, sizoxoxa zako, nebubi, nokunye. D.
Okokuqala, ake sithi amagama ambalwa mayelana nobuchwepheshe uqobo. OLED (kusukela English organic diode ukukhanya-likhipha) - ubuchwepheshe ekhethekile, ogxile idivayisi Semiconductor eyenziwe compounds ekhethekile organic. Lezi zinto zehlela bayakwazi ngenkuthalo ihlaba umkhosi ukukhanya uma weqa ngokusebenzisa kagesi. Iqiniso ukuthi izinto eziphilayo uyakwazi electroluminescence (kukhanya-non-ezishisayo, okuyinto ezazivuswa ugesi) wafunda kudala ngawo-1950. Esavulwa usosayensi French Andre Bernanoz.
Kodwa kanjani lobu buchwepheshe isetshenziswa amathelevishini? I emangalisayo OLED-TV? Kuyini lokhu? Ngalolu futhi eziningi nezinye izinto ungafunda kulesi sihloko.
OLED-TV: Kuyini lokhu?
ubuchwepheshe Old ungathola indawo ezweni lanamuhla. Isibonelo esikhulu sale - OLED-TV. Yini oyikho nalokho ibadla? Izimpendulo zale mibuzo zingatholakala lapha.
Sici sici OLED-TV kuyinto matrix lapho izakhi eziyinhloko obusebenzayo kukhona organic ukukhanya likhipha diodes. Lokho, e ma-TV izakhi organic ehlangana electronics. Ngu ezidlulayo i osenyameni kagesi ngokusebenzisa kwakwakhe zemvelo yalungiswa kukhanya elikhanyayo. Futhi usebenzisa phosphors ungathola eliphezulu ukuvutha yimuphi umbala.
Okwazekayo kuzwakala ezinhle, kodwa indlela izinto ngendlela ebonakalako? Eqinisweni TV OLED isikrini TV eziningi izinzuzo, okuyinto sixoxa ngezansi.
Mhlawumbe inzuzo sokuqala nesibaluleke kakhulu - i ukugqama emangalisayo okusezingeni eliphezulu nezilungiselelo umehluko. OLEDs ukuhlinzeka uhlu olubanzi sokukhanyisa. Siyabonga kubo ungakwazi ulungise ukukhanya kusukela amagugu ubuncane (operation ukhululekile ebusuku) ziphethe phambi abatelekile ukugqama tysyach 100 cd / m 2. Kepha Ngokuphambene, bese OLED-TV ungathola ezingeni lokukwazi 10 million ukuze 1. Yiqiniso, nezinye namathelevishini izinkomba ezinjalo lungafinyeleleki.
Enye inzuzo - compactness. OLED-namathelevishini babe Ubukhulu ezincane kakhulu futhi isisindo. Nalapha futhi, sibonga bonke LED kakhulu organic, okuyinto abe electroluminescence okumnandi. Ngenxa yalokhu, ngokuphelele it is isidingo backlighting. Ngakho, e-kwasemuva izindlu ngaphandle kokulondoloza isikhala esiningi.
Ngaphezu kwalokho, ama-LED engavamile ukuvumela abakhiqizi ukukhiqiza-matrix omusha, okuyinto has a wokubuka engeli ebanzi kakhulu. Lokhu kusho ukuthi OLED-TV ingabonwa kusuka kunoma iyiphi i-engeli futhi namanje ikhwalithi yesithombe izohlala ezingeni elifanayo ngaphandle ukuhlanekezela. Lesi sici qiniseka singaba usizo kabi labo bathanda ukubukela amabhayisikobho nomndeni wakho noma iqembu elikhulu abangane.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi matrix OLED-TV has elijabulisayo Ukusabela isikhathi. Ngisho ku izigcawu ashukumisayo kakhulu, noma ushintsho abukhali kwenkundla ngeke uphawule ithrekhi inertia, okuyinto ngqo exhunywe kwi impendulo enkulu.
Futhi ekugcineni, kufanele ishiwo izindleko zikagesi. Okwesikhathi esithile, kwakukhona amahemuhemu ukuthi OLED-TV elinganeliseki kakhulu futhi zidinga ugesi omningi. Nokho, kwacaca ukuthi amaqiniso abonisa okuphambene. OLED-namathelevishini kudle isilinganiso samandla esingaphansi izikhathi eziningana ngaphandle LCD efanayo.
Ngaphezu izinzuzo OLED-TV babe nobubi obuthile. Mhlawumbe ethile eyinhloko thuluzi - fragility. OLEDs abakwazi ukuqhosha ukuphila isikhathi eside. Red futhi LED oluhlaza ingaqalisa amashumi ezinkulungwane amahora (a inkomba zisenezindinganiso ezinhle zokuziphatha). Inkinga eyinhloko iwukuthi blue LED has amahora mayelana 18,000 (okuthile eminyakeni emibili). Okwamanje, kuba ukuthuthukiswa esebenzayo ye LED nehlala njalo. Okwamanje, abathengi bephoqeleka ukuba ujabulele isithombe ezijabulisayo nje kweminyaka embalwa bese ukubona isithombe siphambane.
Omunye ethile, okuyinto ayikuvumeli abaningi ukuthenga TV OLED - intengo. Ngokuqhathaniswa Kwaholela-TV, i-OLED-model intengo isibhakabhaka-okusezingeni eliphezulu. Phela, into ezithakazelisayo kakhulu ukuthi kufanele kube yiyo indawo engaphephile. Ngo-mbono, ukukhiqizwa OLED-ekhombisa ziyabiza kakhulu. Lokhu kusho ukuthi OLED TV kufanele kube ezishibhile LCD. Kodwa kungani, practice nje, konkhe kwehlukile ngokuphelele? Into wukuthi ukukhiqizwa ubuchwepheshe OLED-ekhombisa azikakabi yingcweti ngokugcwele. Lokhu, kubangela abalulekile izindleko ukwanda.
Kungakhathaliseki ukuthola OLED-TV?
Konke luyingxenye ngamunye. Yiqiniso, kungcono kakhulu ukulinda kweminyaka embalwa. Njengoba kwalotshwa ekuqaleni ubuchwepheshe izihloko ayakhula ngokushesha okukhulu. Lokhu kusho eminyakeni embalwa ezayo bokwenza eyinhloko OLED-TV alungiswe nobuchwepheshe iqala ukusakaza kunonophiswe kubuye. Kungcono ukulinda unyaka owodwa noma emibili futhi ukuthenga umkhiqizo izinga, uthenga futhi ubuhle kudivayisi eluhlaza namuhla.
Uma esingaphezulu ukukukhuthaza, futhi uzimisele ukukhokha imali eningi ukuze ngomunye wabokuqala zama ubuchwepheshe obusha, ake sibheke imodeli engcono OLED-TV kusukela izinkampani ezahlukene.
Okwamanje, amafemu ezimbalwa kakhulu ukuthi waziphatha ukukhiqizwa OLED-TV. Lokhu kungenxa yokuthi sokuthuthukiswa ubuchwepheshe obusha idinga izimali omkhulu. Ngakho, ukukhiqiza TV ezifana can izinkampani ezinkulu kuphela njenge Samsung futhi LG. Imikhiqizo yabo, manje nixoxe.
Samsung KN55S9CAFXZA - ajabulisayo omele OLED-TV kusukela Samsung. Isibuko kufana nokuthi 55 amasentimitha. Ngokuhlanganyela ubuchwepheshe obusha kuyokunikeza isithombe ajabulisayo. Kufanele futhi ukusho amazwi ambalwa mayelana isici esikhethekile ngokuthi Smart TV. isizukulwane samanje TV zilawulwa izwi noma ukuthintwa. Ngalesi ukuphathwa sekuyinto isabele kakhulu futhi elula. Ngaphezu kwalokho, Samsung KN55S9CAFXZA unesinye isici esithakazelisayo ngokuthi Smart Dual Buka. Nge kule modi ungakwazi kanyekanye ukubukela izinhlelo ezimbili ithelevishini sikumabonakude. Imodeli entsha yesiphequluli ithuthukisiwe. Manje ungaxoxa ekuxhumaneni nomphakathi, noma amavidiyo ku-YouTube ngaphandle kokulibala. Ungakhohlwa ukuthi Samsung KN55S9CAFXZA - liphinde asebenzayo 3D OLED-TV. Ubuchwepheshe obusha isithombe kuyoba okuningi ongokoqobo futhi juicier. Ngenxa yalokho, singasho ukuthi Samsung KN55S9CAFXZA - ajabulisayo OLED-TV. Intengo ke kuyehluka ku ekupha 10 000 zamaRandi.
55EA9800 imodeli - okwamanje okungcono OLED-TV LG. Intengo thuluzi nxazonke 9000 amadola (ezishibhile Analogue kusuka Samsung). Isibonisi 55 amasentimitha. LG 55EA9800 inobungako izici ewusizo. Ngokwesibonelo, i-TV isekela Skype. Ngaphezu kwalokho, zonke izici ezijwayelekile ezifana nalezi isilawuli sezwi imodi "Isithombe e Isithombe" nokunye. D. Kuyathakazelisa ukuthi i-TV has usekelo 24p Cinema Iqiniso. Ungayisebenzisa ukubuka amafilimu e begunya bona zisusiwe (ie 24 ngesekhondi). Njengabantu abaningi yesimanje TV LG 55EA9800 ukwazi ukuxhuma kwi-Wi-Fi.
Amanzi Idamu heater Ukushisa engaqondile: operation, ukuxhumana, Izibuyekezo
Uhlolojikelele-headphone kusukela Urbanears
Ikuphi ukuhlobana okukhona serial?
Abalingisi "Umkhumbi" - Russian uchungechunge TV